Vaovao - Fandaharana fampirantiana tamin'ny septambra
China Expo mpiompy biby iraisam-pirenena, fantatra amin'ny anarana hoe CAHE erak'izao tontolo izao, notontosaina tamin'ny 4-6 septambra fa tany amin'ny tanàna samihafa isan-taona, no fampisehoana fiompiana lehibe indrindra any Asia! CAHE dia mety ho sehatra tonga lafatra indrindra ho anao hahafantatra momba ny indostrian'ny biby fiompy sinoa ary manomboka ny orinasanao any Shina!
Daty: 4-6 Sep 2020
Toerana: Ivotoerana fampirantiana sy fampirantiana Changsha, faritanin'i Hunan
Center Ivotoerana fampirantiana sy fampirantiana Changsha)
Mifandraisa amin'ny mpanangona fanangonana atody na tsipika famokarana fanadiovana atody
Amboary ambony loha ny loha lehibe
Fehezo amin'ny efijery touchscreen, zarao amin'ny kilasy lanja 4/6
Mety amin'ny dabilio plastika 6 * 5 sy ny lovia taratasy.
Mitsitsia asa, mpiasa 3-4 ihany no mahazaka 30000eggs isan'ora, raha tsy atody ny atody tsy misy fijanonana, atody 200 arivo no mila 7hatra fotsiny.
Ny sisin'ny atody rehetra eo alohany, tsara azo tehirizina.
Ny tahan'ny fahatapahana dia ambany noho ny tanana, indraindray tsara kokoa noho ny toeram-piompiana akoho tsy dia tsara fitantanana.
SARY FAIRA 2019
17-19 septambra 2020
10:00 - 18:00 ora
Booth No. .: S2-339
Sary VIV QINGDAO 2019
Fampiroboroboana ny varotra mpiompy biby eny afovoan-tany faha 32
(Foara fivarotana akoho amam-borona Henan)
Taorian'ny fanavaozana sy fandrosoana 31 taona, ny foibe ara-barotra momba ny fiompiana eny amin'ny lemaka afovoany (Fair Trade Trade Henan Poultry) dia nanjary fampirantiana avo lenta, lehibe, manan-kery, marika anarana, votoatin'ny hetsika maro be, ary mpitsidika marobe . Sehatra lehibe iray hidiran'ny orin'asa mpiompy an-trano sy any ivelany amin'ny tsenan'ny fiompiana Central Plains. Tontosa soa aman-tsara tao Zhengzhou tamin'ny taona 2019 ny foara ara-barotra momba ny fiompiana 31 Plains Central Plains. Maherin'ny 100000 ny isan'ireo mpitsidika. Ny faritra fampirantiana anatiny sy ivelany dia 80.000 metatra toradroa. Fampiroboroboana ny famatsiam-bola, dinidinika an-tampon'ny fihaonana an-tampony ary lohahevitra manokana no natao. Nisy hetsika 20 mahery toy ny tatitra, ary ireo orinasa mpandray anjara dia nahitana faritany 30 sy firenena mihoatra ny 10 avy any ivelany.
Zhengzhou International Convention and Exhibition Center, faritanin'i Hunan
28-29 septambra 2020
8: 30-17: 00 ora
Booth No. .: J107
Sarin'ny foara farany
Miarahaba anao fatratra hitsidika ny trano heva misy anay.
Masinina manendaka atody nandrahoina, Hatching atody Packer, Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina manasokajy sy milina fanangonana, Masinina fonosana atody, Masinina mamaky atody mandeha ho azy,